Izenzo Zangaphambi Kokwembulwa Kwamakhaya ENew Jersey ziphansi kusuka ku-2015, kepha namanje zisenkingeni ebhekene Nabaninikhaya Abaningi BaseNew York - I-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Blog / Ukuvikelwa Kwemboni YeNew York / Izenzo Zangaphambi Kokwembulwa Kwamakhaya e-New Jersey ziphansi kusuka ku-2015, kepha kuseseyinkinga ebhekene nabaninikhaya abaningi baseNew Jersey
April 11, 2016 Ukuvikelwa Kwemboni YeNew YorkShiya amazwanaUDerek Soltis
Ngaphezulu kwe-3,000 Izinyanga Ezifakwa Ngaphambili Ukudalulwa eNew Jersey
Ezinyangeni ezintathu zokuqala ze-2016 ngaphezulu kwama-9,200 lis pendens afakiwe ezweni lonke eNew Jersey. I-lis pendens yisenzo sangaphambi kokudalulwa okufakwe enkantolo. Amabhange amakhulu kanye nabanye abantu abafuna ukubikezela kwifayili yempahla ama-lis pendens ukuqala isinyathelo sokubekwa obala ngokumelene nomnini khaya. Ama-pendens ahlinzeka bonke abathengi abangaba khona futhi abanikazi bamanga baqaphele ukuthi kukhona isimangalo esithinta impahla. Noma ngubani onentshisakalo noma ongaba nentshisekelo kuleyo mpahla angathola ukuthi ngabe kukhona izinyathelo zomthetho ezibandakanya impahla ngokuhlola amarekhodi asenkantolo. Lokhu kusebenza ukuvikela abangahle bathenge impahla.
Ngaphezulu kwe-100 Homes ngosuku kufakwe isenzo sangaphambi kokudalulwa eNew Jersey
Ngokuvumelana ne I-RealyTrac, cishe izakhiwo ze-1.1 million ezweni lonke zazinezihlungi zokubonisa nge-2015. Ku-2015, kufakwe isimangalo ngaphambi kokudalulwa kwe-41,200 eNew Jersey ngokusho kweNew York State Court Record. Lesi yisilinganiso semizi ye-113 ngosuku lapho kufakwe isimangalo se-pendens eNew York.
Izinga lokugcwaliswa kwezenzo zokuchazwa kwangaphambi kwezinyanga ezintathu zokuqala ze-2016 eNew Jersey lehle ngo-10.6% ukusuka kusilinganiso sezinsuku zansuku zonke ze-2015. Amarekhodi asenkantolo eNew Jersey akhombisa ukuthi i-9,060 lis pendens izenzo zagcwaliswa ngoMashi 31, 2016. Lokho kusebenza ukuthi kube ngokwesilinganiso semizi ye-101 ngosuku lapho kufakwe isenzo sangaphambi kokudalulwa okwenzelwe zona eNew Jersey ukuqala kwe-2016. E-2015 phakathi nezinyanga ezintathu zokuqala konyaka, cishe kufakwe isimangalo ngezenzo ze-11,500 zangaphambi kokubikezelwa.
Izenzo ze-Pre-Foreclosure zeJersey City zinamafayela esenzo aphakeme kakhulu we-5th e-New Jersey ye-2016
Izindawo ezihlasele kakhulu e-2015 eNew Jersey kwakuyiNewark enamafilimu angaphezu kwe-1350, iTrenton enama-1050 filings, uPaterson enama-880 Filings ngaphezulu, iJersey City enama-850 prefixial filings, neToms River enama-700 filings. Okwakuqala kwe2016, la madolobha amahlanu ahlala eyidolobha elinokuhlunga okukhulu kunakho konke, kepha iToms River inezinhlobo zokuhlunga kuqala kunedolobha laseJersey ukuqala unyaka.
Phendula i-New Jersey Lis Pendens ngezinsuku ze-35
Lapho amasamanisi isikhalazo sithunyelwe kumnikazi wekhaya, umnikazi wekhaya unezinsuku ze-35 zokufaka impendulo eNew Jersey ukufaka impendulo eNew Jersey noma abhekane nesinqumo senkantolo. Noma ngabe ubhekene nokuthengiswa okungahle kube yindlu yakho kungenzeka kungabi sekephuze kakhulu ukuxhumana nommeli eNew Jersey ukufaka isenzo esiphuthumayo ukusindisa ikhaya lakho. Uma unemibuzo mayelana nokuvezwa kweNew Jersey, sicela uxhumane nommeli namuhla.
Uma ngifa ngizokuthola malini uHulumeni?
Kungani Uyenza Wena Wills kuyingozi?